I-Adriatic Sea: izici, ukubaluleka kanye nomnotho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngaphakathi ULwandle iMedithera kunezingxenye ezincane zalolu lwandle oludlulela phakathi kwamachibi aseduze. Enye yalezi zingxenye yi- Ulwandle lwe-Adriatic. Kuyingxenye esukela enhlonhlweni yase-Italy nasogwini olusentshonalanga yenhlonhlo yaseBalkan. Inobude obungamakhilomitha angama-800 nobubanzi obukhulu bamakhilomitha angama-200. Ulwandle olunentshisekelo enkulu yezohwebo nezokuvakasha.
Kulesi sihloko sizokutshela ngazo zonke izici, ukwakheka nokubaluleka koLwandle i-Adriatic.
2 I-Adriatic Sea kanye nogu lwase-Italy
3 I-Adriatic Sea kanye nogu lwaseBalkan
4.1 Imithombo yemvelo
Kuyingxenye yoLwandle iMedithera olusuka eGulf of Venice enyakatho-ntshonalanga luye eStrait of Otranto eningizimu-mpumalanga. Indawo ephelele yoLwandle i-Adriatic icishe ibe amakhilomitha-skwele ayi-160.000 futhi ukujula kwayo okujwayelekile kungamamitha angama-44 kuphela. Ingenye yezilwandle ezingajulile kakhulu emhlabeni wonke. Ingxenye enokujula okukhulu iphakathi kweGargano neDurres futhi kamuva ifinyelela ekujuleni kwamamitha ayi-900.
Yize kungeyona ibha ebanzi kakhulu, igeza izingqimba zamazwe ayi-6. La mazwe ami kanje: I-Italy, iSlovenia, iCroatia, iBosnia-Herzegovina, iMontenegro ne-Albania. Igama loLwandle i-Adriatic livela koloni lwase-Etruria lwaseHadria. Leli koloni lalisemaphethelweni ase-Italy futhi yingakho amaRoma alibiza ngokuthi iMare Hadriaticum.
Phakathi kwemimoya ekhona esiyithola kulolu lwandle igcwele esifundeni futhi ibizwa ngegama le-bora. Ishaya ngamandla impela ohlangothini olusenyakatho-mpumalanga, kanti lo omunye umoya obizwa kakhulu ubizwa nge-sirocco. Lo moya uthambe kancane uvela ohlangothini oluseningizimu-mpumalanga. Yomibili le mimoya iyashintshana unyaka wonke kuya ngesizini okuyo.
Njengoba ilulwandle olungajulile, inelinye lamagagasi amenyezelwa kakhulu kulo lonke uLwandle iMedithera. Futhi kunomehluko ophawulekayo phakathi kogu lwawo womabili. Ngakolunye uhlangothi, sinogu lwase-Italy olunomumo oqondile futhi oqhubekayo futhi olungenazo iziqhingi. Ngakolunye uhlangothi, sinogu lwaseBalkan, ikakhulukazi olunwetshiwe ugu lwaseCroatia, luminyene impela futhi lugcwele iziqhingi ezinobukhulu obuhlukahlukene. Iziqhingi eziningi zinobude obude futhi zihlelwe ngokufana nogu olungasempumalanga.
I-Adriatic Sea kanye nogu lwase-Italy
Siyazi ukuthi uLwandle i-Adriatic ohlangothini lwase-Italy lunwebeka ngamakhilomitha angu-1.250 ogwini. Iqala kusukela ethekwini laseTrieste enyakatho iye eKapa lase-Otranto. Ibizwa ngesithende sebhuthi lenhlonhlo yase-Italy.
Okusemqoka Izingozi zendawo esikuthola kulolu lwandle yilokhu okulandelayo: iGulf of Trieste, i-Po delta neGulf kanye ne-lagoon yaseVenetian, bonke bangasenyakatho. Ngokuya eningizimu sithola inhlonhlo yaseGárgano nePuglia kanye neGolgo de Manfredonia.
Njengoba sishilo ekuqaleni kwendatshana, ulwandle olubaluleke kakhulu kwezomnotho. Futhi ukuthi inamachweba ambalwa asemqoka anentshisekelo enkulu yezomnotho. Lawa machweba, kusuka enyakatho kuya eningizimu: iTrieste, iVenice, iRavenna, iRimini, i-Ancona, iBari neBrindisi.
I-Adriatic Sea kanye nogu lwaseBalkan
Ake sihlaziye enye ingxenye yoLwandle i-Adriatic. Le ngxenye yolwandle isikwe kakhulu futhi ineziqhingi eziningi. Ngakho-ke, ugu lwaseBalkan Adriatic lunobude bamakhilomitha angama-2.000 XNUMX. Lobu ubude buqala echwebeni laseSlovenia laseKoper kuye eStrait of Otranto.
Ekupheleni kwengxenye esenyakatho inhlonhlo yase-Istrian. Indawo ebizwa ngokuthi ugu lweDalmatia, eseCroatia, iqala kule nhlonhlo. Into enelukuluku ngalolu ugu olusempumalanga yelulwa yiziqhingi ezingaba ngu-1.200 XNUMX ezinobukhulu obuhlukahlukene ngendlela enamachashazi ebhekise kumamaki eDalmatia. Iziqhingi ezibaluleke kakhulu ngokobukhulu yiCres, Krk, Pag, Hvar, Brač neKorčula, phakathi kwezinye eziningi. ENingizimu yeDalmatia yiBay of Kotor.
Amachweba amakhulu okuhweba atholakala engxenyeni yeBalkan yoLwandle i-Adriatic, kusuka enyakatho kuya eningizimu: iRijeka, iSplit kanye neDubrovnik (eCroatia), iKotor (Montenegro) neDurres (Albania).
Lolu lwandle, yize lincane, lubaluleke kakhulu kwezomnotho emisebenzini ehlukahlukene yabantu. Sizobona ukuthi yimiphi imithombo yezomnotho i-Adriatic Sea enikela ngayo kuwo wonke amadolobha azungezile.
Nazi izimali eziwela ngaphansi kwamanzi zokuwa kwegesi ezitholwe cishe engxenyeni yekhulu edlule. Noma zitholwe phambilini, baqala ukuxhashazwa ngawo-90. Ngasogwini lwe-Emilia-Romagna kunamapulatifomu angaba yikhulu wokukhishwa kwegesi. Lo gesi usetshenziselwa ukuphakela ugesi emadolobheni aseduze.
Ngasenyakatho, ePo Basin, sithola amadiphozithi abalulekile kawoyela. Eziningi zalezi zimali zisasesigabeni sokuhlola njengoba zisanda kutholakala.
Kungenye yemisebenzi ebalulekile yezomnotho eyenzeka oLwandle i-Adriatic. Kungumsebenzi omkhulu wezomnotho kulesi sifunda kuwo wonke umlando. Kodwa-ke, okwamanje, ngenxa yomuntu, kunenkinga enkulu yokusebenzisa ngokweqile ukudoba. Ukubanjwa okuphezulu kakhulu kufana nendawo yase-Italy. Kulapha lapho cishe abantu abangama-60.000 benemisebenzi yokudoba, emele ama-40% womkhiqizo ophelele wezokudotshwa kwezinhlanzi ezweni.
Ekugcineni, umsebenzi wezomnotho onikeza izinzuzo ezindaweni eziseduze ezokuvakasha. Amazwe anqamula uLwandle i-Adriatic ayizindawo ezibalulekile zabavakashi. Izindawo eziyinhloko yilezi: isifunda saseVeneto kanye nogu lwe-Emilia-Romagna, zombili e-Italy, kanye naseDalmatia Coast yaseCroatia. Yize kungeyona eyinhloko, ezokuvakasha zingumthombo wemali emazweni asogwini lwaseBalkan. Ikakhulukazi ukuthanda umusa iCroatia neMontenegro. Ingqikithi yomkhiqizo ophelele wasekhaya walawa mazwe iyingxenye yomsebenzi wezokuvakasha.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngoLwandle i-Adriatic nezimpawu zalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Ulwandle lwe-Adriatic